Content Writer တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ – Live the Dream
Content Writer တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့
“Content Writer ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ၊ ဘာတွေလိုအပ်လဲ၊ Content ဘယ်လိုရေးရမလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chatbox မှာ လတ်တလော အမေးများနေတာမို့ စာအရေးအသား စိတ်ဝင်စားပြီး Content Writer ဖြစ်ချင်သူတွေအတွက် သိသလောက်ထဲကနေ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ တစ်ချို့နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ Content Writing အလုပ်ဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရှိသလို အိမ်ကနေလည်း လုပ်လို့ရတယ်၊ Freelance လုပ်လို့လည်း အဆင်ပြေတယ်၊ လုပ်ငန်းကြီးတွေ အနေနဲ့လည်း နောက်ပိုင်း အလုပ်ခေါ်တာတွေ များလာတာမို့ လူငယ်လေးတွေအကြား စိတ်ဝင်စားမှု ပိုမြင့်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေး စာဖတ် ဝါသနာပါတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ အနေနဲ့လည်း အားလပ်တဲ့အချိန်မှာ အပိုဝင်ငွေ ရှာဖွေမှုအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ အလုပ်အကိုင် တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေ အတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးက အကျိုးရှိစေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။
၁. ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ မြန်မာစာအရေးအသား
ဒါလေးက ကျွန်တော်ဒီနယ်ပယ်မှာ အလုပ်စဝင်တဲ့အချိန် ကြုံခဲ့ရတာလေးပါ။ အဲ့တုန်းက စာသိပ်မရေးတတ် သေးတော့ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့ ရေးဖို့ထက် သူများရေးတာတွေကို အများကြီး လိုက်ဖတ်ပြီး သူတို့ပုံစံ လိုက်ကူးတော့တာပါပဲ။ အဲဒီအခါကျ စာကအနှစ်သာရ မရှိ၊ ကိုယ်ပိုင်ဟန် မရှိဘဲ အသက်မဲ့သလို ဖြစ်နေရော။ နောက်ပိုင်းကျ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့ ရေးဖို့ ကြိုးစားတော့မှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဆင်ပြေလာတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ Live the Dream ကစာရေးဆရာတွေမှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး ကွဲပြားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာတွေလိုက်ဖတ်ပြီး အကြံဉာဏ်ယူလို့ ရတယ်၊ သင်ယူနိုင်တယ် ဒါပေမယ့် ပုံစံကိုတော့ လိုက်ကူးမချပါနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပါ။
နောက်တစ်ချက်က မြန်မာစာအရေးအသား အထူးကောင်းမွန်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို စာရေးဆရာတွေသာ အရေးအသားမှားယွင်းနေရင် စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့ မှားယွင်းစွာ သင်ယူမိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက်အနေနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဖတ်မယ့်စာကို ရေးသားနေသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ မြန်မာစာ အရေးအသား မှားယွင်းမှု မရှိစေဖို့၊ စကားလုံး အထားအသို မှန်ကန်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်နော်။
ဆန်းသစ်တီထွင် ဖန်တီးမှု ဆိုသောအရာကလည်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရဲ့ မရှိမဖြစ် လက်နက်တစ်ခုပါပဲ။ ဆောင်းပါးရေးသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့အတွေးတွေကို လုံးဝ ဘောင်ခတ်ထားလို့ မရပါဘူး၊ တွေးနိုင်သလောက် စိတ်ကူးယဉ်နိုင်သလောက် အတွေးနယ်ချဲ့ပေးမှ အတွေးသစ်၊ အမြင်သစ်လေးတွေ ထွက်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတလော ဘာတွေ ာခေတ်စားနေတာလဲ၊ ဘယ်လိုလေးတွေ အသုံးများနေလဲ၊ ဘယ်လိုပုံစံလေး ပြောင်းကြည့်ရင် ကောင်းမလဲ၊ ဘယ်လိုပုံစံဆန်းဆန်းလေးတွေ သုံးမလဲ ဆိုပြီး မင်မင်တို့ဆိုလည်း အမြဲမပြတ် စဉ်းစားနေရတာပါ။ ဒါကြောင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက်၊ စာဖတ်သူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအလိုက် စာအရေးအသားပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသုံးအနှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြောင်းအရာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမြဲတမ်း တစ်ပုံစံတည်း မဟုတ်ဘဲ အသွင်သစ်လေးတွေ ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အရေးအသားအပြင် စိတ်ကူးတွေလည်း ပိုမို တိုးတက်လာမှာပါနော်။
ဆောင်းပါးရေးတဲ့အခါ ကိုယ့်ဆောင်းပါးကို ဘယ်သူတွေ ဖတ်မှာလဲ ဆိုတဲ့အချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ဖတ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ တတ်ထားသင့်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ သင်တန်းတွေအကြောင်း၊ လူငယ်သဘာဝလေးတွေအကြောင်း အဲလိုမျိုး သူတို့တွေ စိတ်ဝင်စားမယ့်၊ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေ ရေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါး အကြောင်းအရာ၊ ပုံစံတွေက စာဖတ်သူနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်နေတာမို့ ဒီအချက်ကို မေ့လို့မဖြစ်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် စာဖတ်သူ အမြင်ကနေ စဉ်းစားပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ကိုယ်ရေးထားတာကို စာဖတ်ပရိသတ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်နေရာကတော့ဖြင့် ဘယ်လိုလေး အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခွ ထွက်နေတယ်၊ ဘယ်နားက ဖတ်ရတာ ထောက်တယ်၊ ဘယ်အကြောင်းကိုတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ အမြင်လေးတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ဘဲနဲ့ စာရေးသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရေးထားတာ ကောင်းတယ် လို့ပဲ ပိုပြီး အထင်ရောက် တတ်တာမို့ ဒီလိုလေးလုပ်ပေးရင် အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
၄. ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးမှာလဲ
ကျွန်တော်တို့ ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတိုင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်၊ စာဖတ်သူတွေကို ပေးချင်တဲ့ Message တစ်ခု အမြဲတမ်း ရှိပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘဲနဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ရောက်တက်ရာရာ ရေးချလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆောင်းပါး ရေးမယ့်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ အရင်ဆုံး ကိုယ်က ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးမှာလဲ၊ ဘာကို ပြောပြ ချင်တာလဲ၊ စာဖတ်သူကို ဘယ်လိုအသိမျိုး ပေးချင်တာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ အခုဒီဆောင်းပါးဆိုရင် စာဖတ်သူတွေကို Content Writer တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ ဆိုတဲ့ Message ပေးဖို့ အဓိက ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ ဆိုတော့ ဆောင်းပါးရှင် ဖြစ်ချင်သူများ ဒီအချက်လေးကို သတိချပ်ကြစေချင်ပါတယ်နော်။
ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ အဓိက အရေးကြီးတဲ့ Main points လေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ခေါင်းစဉ်၊ ဦးတည်ရာ ပျောက်မသွားဖို့ရယ်၊ ဒီဇိုင်းကာလာ အနေအထားရယ်၊ ပြန်လှန်စစ်ဆေးမှု တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ကြည့်နေရင်း ဆောင်းပါးအရှည်ကြီး တစ်ပုဒ်ကို ဝင်ဖတ်ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်အပေါ် အဓိက မူတည်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်က စိတ်ဝင်စားစရာ၊ သိချင်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးတာမျိုး ဖြစ်နေမှ ဘာအကြောင်း ရေးထား ပါလိမ့်ဆိုပြီး ဝင်ဖတ်ဖြစ်မှာပါ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ကဲ… စာဖတ်ပါပြီတဲ့ ပြောထားတဲ့ အချက်တွေက အရမ်းကို များနေတယ်၊ အဓိက ဘာပြောချင်နေမှန်းမသိဘူး၊ အချက်အလက်တွေကလည်း ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှ ဆက်ဖတ်ချင်စိတ် ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရေးတဲ့စာဟာ အကြောင်းအရာ တစ်ခုတည်းအပေါ် မှီတည်နေတာမျိုး ဖြစ်ဖို့လိုတယ်၊ ရေးတဲ့အခါမှာလည်း ဟိုရောက် ဒီရောက်မဖြစ်ဘဲ ဦးတည်ချက် တစ်ခုတည်း ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်နော်။
နောက်တစ်ခုက ဒီဇိုင်းပိုင်းပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ စာအရေးအသား၊ စကားလုံး အသုံးအနှုန်း၊ ရေးထားတဲ့ စတိုင်၊ စာပိုဒ် ခွဲတာတွေအထိ… ဒါတွေက စာဖတ်သူကို အဓိက ဆွဲဆောင်တဲ့ အချက်တွေပါ။ ဒါကြောင့် ဆောင်းပါးရဲ့ ဒီဇိုင်းကာလာ အနေအထားကို အထူး ဂရုပြုဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် မတင်ခင် အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လှန် စစ်ဆေးပေးရပါမယ်။ ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေလား၊ ထောက်တဲ့နေရာ ရှိလား၊ အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခွ သက်ရောက်နိုင်တာတွေများ ရှိလား၊ စာလုံးပေါင်း မှန်ရဲ့လား အကြိမ်ကြိမ် ပြန်စစ်ဆေးပေးပြီးမှ တင်ပေးပါနော်။
မင်မင်တို့ဆိုရင်လည်း ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ စာတွေ အများကြီး ဖတ်ရတယ်၊ အများကြီး လေ့လာရတယ်၊ အချက်အလက်တွေ စုစည်းရတယ်၊ နောက်တော့ ပြန်ရွေးထုတ်တာတွေ၊ စာစီတာတွေ လုပ်ပြီးမှ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ထွက်လာတာပါ။ စာတွေဖတ်ပြီး ခေါင်းအရမ်းကိုက်လို့ Computer ဆက်မကြည့်နိုင်တော့တာမျိုးတွေ ဆိုတာ မင်မင်တို့ ကြုံနေကျ ကိစ္စတွေပါ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုး အပင်ပန်းခံပြီး Research အမျိုးမျိုး လုပ်ပေးမှ မှန်ကန်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေ ထွက်လာမယ်၊ ပိုပြီးပြည့်စုံနိုင်မယ် ဘာလို့ဆို မင်မင်တို့တွေက အကုန်လုံး သိနေ တတ်နေတဲ့ သူတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဆိုတော့ တကယ်လို့များ ကိုယ်ပြောတာ မှားသွားခဲ့ရင် နစ်နာမှာက စာဖတ်သူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် Research ဆိုတာကို လက်မလွှတ်တမ်း အမြဲတမ်း လုပ်နေရတာပါ။ ဒါကြောင့် အပင်ပန်းခံနိုင်ဖို့ရယ်၊ Research လုပ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေ ရှိအောင် ကြိုးစားပါနော်။
၇. Deadline အန္တရာယ်
ဒါကတော့ ကျောင်းသားတွေ ကောင်းကောင်း သိကြမှာပါ။ မင်မင်တို့လည်း ဆောင်းပါးရေးရတာ Assignment ရေးနေရတဲ့ အတိုင်းပါပဲ Deadline အမီ တင်ပေးရတာမို့ တစ်ခါတစ်လေကျ Deadline က အရမ်းနီးနေပြီ၊ စာကမပြီးသေးဘူး၊ အဲ့မှာ စိတ်တွေအရမ်းပူပြီး ရေးဖို့စာ ခေါင်းထဲက မထွက်နိုင်တော့တာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဆောင်းပါးရှင်များ ကြုံရတဲ့ ဒုက္ခတွေထဲက တစ်ခုပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဟာ စိတ်ကူးဉာဏ်ကွန့်မြူးဖို့ အချိန် အကန့်အသတ်မရှိ ရနေတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် Content Writing ပိုင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ အချိန်ကန့်သတ်ချက်အတွင်း စာရေးနိုင်ဖို့ ကြိုတင်သတိချပ်ထားသင့်သလို ဒီလိုမျိုး Deadline ကပ်တဲ့အချိန် ပရမ်းပတာတွေ မဖြစ်ရအောင် Time Management ကိုသေချာ စီမံနိုင်ဖို့လည်း လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်နော်။